किन आउँछ शरीरमा मुसा ? प्रकार, लक्षण र उपायबारे जानौं | Hamro Doctor News
By डा. ललितकुमार मिश्र, होमियोप्याथिक कन्सलटेन्ट
जन्मिएपछि देखा पर्ने मुसाको मुख्य कारण ईन्फेकसन नै हो । यी मुसाहरु शरीरमा आउनुको कारण एक प्रकारको ह्युमन पेपिलोमा नामक भाइरस हो । छालामा पेपिलोमा भाइरसको कारण सासाना, खस्रो, कडा खालको, नदुख्ने दानाहरु छालामा पलाएको देखिन्छ । केही प्रकारका मुसाहरु शारीरिक सम्पर्कको माध्यमले पनि फेलिन्छ । मुसा तोरीको दानादेखि अंगूरको आकार जत्रो पनि हुनसक्छ । मुसा शरीरको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दै जान्छ । यो एक किसिमको छालाको रोग हो । जसलाई मुसा (वार्टस) भनिन्छ । सामन्यतया शरीरमा देखिने मुसाहरु कालो, खैरो, सेतो, रातो हुन्छन् । काही छालाको रंग जस्तै पनि हुन्छ । जसले गर्दा मानिसलाइ मुसा आएको थाहा नै हुदैन । यसकारण मानिसहरु यसको बारेमा ध्यान दिदैनन ।
च्याप्टो खालको मुसा (फ्लयाट वार्टस) ः बच्चा र व्यस्यक व्याक्तिमा बढी देखिन्छ । बिषेशगरी केटाकेटीको अनुहार, निधार, हात र खुट्टामा देखिन्छ । यो अन्य मुसा जस्तो सजिलै थाहा पाउन सकिन्न । यस्ता मुसा सासाना थोप्ला जस्ता देखिन्छन र यसको टुप्पो पनि समथर हुन्छ । यो दाह्री जुँगा भएको ठाउँमा बढी आउँछ । यस प्रकारको मुसा बच्चाको हात मा पनि देखिन्छ ।
जेनिटल वार्टस (कन्डिलोमा) अर्थात गुप्तांगमा देखिने यो मुसा ः सामान्यतया गुप्तांग वरिपरि र तिघ्राको बिचमा, तथा महिलाको योनीका साथै मलद्वार मा पनि देखिन्छ । यी मुसा यौन सम्पर्कबाट सर्छ । यी मुसाहरु आकारमा अंगुरका झुप्पा जस्ता ससानादेखि ठुला ठुला झुप्पा जस्ता पनि हुनसक्छ ।
हत्केला र खुट्टामा देखिने मुसालाई प्लामो प्लान्टर वार्टस भनिन्छ । हत्केला र खुटाको पैतालामा हुने यस प्रकारका मुसाहरु दुख्ने र सार्हो हुनुको साथै बिचभागमा केही खाल्डोयुक्त हुन्छ । यसले गर्दा ब्याक्तिलाई हिडडुल गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ । नङको जरा वा वरपर यस्तो मुसा आउँदा अत्यन्तै दुख्ने हुन्छ ।
खैरो (ब्राउन) किसिमको मुसाको लागि–थुजा ।
सुख्खा किसिमको मुसा भएमा– स्टेफिसिग्रिया ।
फल्याट (चेप्टो) प्रकारको मुसामा–डल्कामारा ।
झुन्डिएको (पेन्डुलम) जस्तो मुसा छ भने–एसिड नाईट्रिक ।
पिबयुक्त मुसा छ भने–हिपर सल्फर ।
औलाको पछाडि पट्टि मुसा देखिएमा (डल्कामारा, थुजा ।)
मुसा खस्रो, कडा र तिखो चुच्चो निस्केको छ भने–कस्टिकम ।
हत्केलामा मुसा आएको छ भने–नेट्रम (म्युर, रुटा, नेट्रम, कार्व, एनाकर्डियम ।)
कम्मर पछाडीपट्टिको भागमा मुसा भएमा–डल्कामारा ।
पैतालामा भएको मुसाको लागि भने– एन्टीम क्रुड ।
Last modified on 2019-10-10 07:32:56